အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပုံတင်တဲ့ ကောင်မလေးများဖတ်ရန် ကျော်မသွားနဲ့နော် ဗဟုသုတရအောင်လို့ပါ….. – SainPwar
SainPwar > ဗဟုသုတများ > အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပုံတင်တဲ့ ကောင်မလေးများဖတ်ရန် ကျော်မသွားနဲ့နော် ဗဟုသုတရအောင်လို့ပါ…..
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပုံတင်တဲ့ ကောင်မလေးများဖတ်ရန် ကျော်မသွားနဲ့နော် ဗဟုသုတရအောင်လို့ပါ…..
ပြည်သူ့‌ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေပြည်တော်က အချုပ်ထောင်ထဲသို့ စစ်ကောင်စီ ပို့ဆောင်
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပုံတင်တဲ့ ကောင်မလေးများဖတ်ရန် ကျော်မသွားနဲ့နော် ဗဟုသုတရအောင်လို့ပါ
Online ​ေပၚမွာ ပံုတင္​​ေကာင္​း​ေသာ အစ္​မ ညီမ​ေလးမ်ား မ​ေက်ာ္​ပဲဖတ္​​ေပးၾကပါရန္​
၏စာ​ေစာင္​ကို ၂၀၁၃ မွာ ​ေရးသားခဲ့တာပါ ယခု မဖတ္​ရ​ေသးတဲ့ သူ​ေတ​ြအတြက္​ ျပန္​တင္​​ေပးပါရ​ေစ
(စာေရးသူအသံုးအႏႈံး ႐ိုင္းေကာင္း ႐ိုင္းႏိုင္ပါတယ္…ဒါေပမယ့္ ပြင့္လင္းစြာေျပာတတ္တဲ့အမူအက်င့္ေၾကာင့္ စာဖတ္သူမ်ား နားလည္ေပးေစလိုပါတယ္…ဒီစာကိုဆံုးေအာင္ဖတ္ၾကည့္ပါ…ဖတ္ၿပီး ရင္ထဲမွာအမွန္တရားတစ္ခု သိရွိလက္ခံလိုက္ၾကရမယ္ဆိုရင္ ေရးရႀကိဳးနပ္ပါၿပီ)
Facebook ေပၚမွာ မိန္းမသားတစ္ခ်ိဳ့မွားယြင္းမႈေတြ နဲ႔ ့သာယာေနၾကတာေတြ႕ရတယ္… ပုရိသ က်ားသဘာဝ ကို နားမလည္… ထင္ေပၚမႈအတြက္ မေပၚ ေပၚေအာင္ေဖာ္လို ့… အဝတ္ဗလာေလးေတြနဲ ့ဆယ္လီရူး ရူးေနၾကျပန္တယ္ ….
သမီးလွလာဟင့္… ဆိုတဲ ့ေနာက္မွာ သားေကာင္ရွာတဲ့ က်ားတခ်ိဳ ့ေပးတဲ့ likeသိန္းခ်ီရလို့တဏွာရူးေတြရဲ့ အလွဘုရင္မ အျဖစ္ ေမာ့ၾကြားေနၾကျပန္တယ္
ညစ္ညမ္း မႈေတြေအာက္မယ္ သား မယား အျဖစ္ဆဲဆိုခံေနရလည္း သူ ့မတို ့အတြက္ စိတ္ထားေကာင္းသူ ၾကီး အျဖစ္ေဖာ္ျပလို့မိမိရဲ့အမွားေတြကိုျပဳျပင္ဖို့မၾကိဳးစားဘဲ ေဖာ္ျမဲ ထုတ္ေဖာ္ျပျမဲမို ့စိတ္ကူးန႔ဲ မုဒိမ္းက်င့္ ခံေနရွာတယ္
အကိတ္ အကိတ္ဆိုတဲ့ ေခတ္စကားေၾကာင့္မိန္းမသားတခ်ိဳ onlineကို ဘဝထင္ ဆယ္လီဆိုတဲ့ နာမ္စားေလးရဖို ့အျပိဳင္အဆိုင္ ေဖာ္ခြ်တ္ေလးေတြနဲ့ပုရိသေတြအတြက္ စိတ္ကူးနဲ့ မုဒိမ္းက်င့္ခံေနရတဲ့ ဆယ္လီရူးေတြ မ်ားလာခဲ့တယ္
မင္းသမီးေတြက ေဖာ္ခ်ြတ္ ဆယ္လီရူး ငပိန္းမေတြက အကုန္ေဖာ္ထုတ္လို ့ဖာဆန္ဆန္စရိုက္ပ်က္ေတြနဲ႔ onlineဆိုတာ သားေကာင္ရွာတဲ့ ပုရိသက်ားေတြအတြက္ ပိုက္ဆံေပးဖာခ်စရာမလို Free မုဒိမ္းက်င့္လို ့ရေနခဲ့ျပန္တယ္
သမီးလွလာဟင့္ ဆိုတဲ့စကားနဲ ့ပုရိသေတြကိုခ်ဳပ္…
ရင္ေလးကိုေဖာ္ တင္ေလးေကာ့လို ့
ဆယ့္ႏွစ္ႀကိဳးကေဝ နည္းေတြနဲ့ျပဳစားအၿမီးေလးနန္ ့အၫွီအေဟာက္ႀကိဳက္တဲ့ တဏွာရူး ေခြးတစ္အုပ္ရဲ့ အားေပးမႈေအာက္​မယ္ေတာ္ေတာ္ခရီးေပါက္လို့ေအာ္…ငါ့ညီမေလးမ်ားကေငြေပးစရာမလိုတဲ့ online ဖာဆိုလားဘဲ
ငါကေတာ့ Facebook ဆယ္လီကြ ဆိုတဲ့ မာန္ နဲ ့ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ့္ အလွဘုရင္မ တစ္ပါး လိုထင္ျပီးLike ေတြ ေပၚမွာ ဂုဏ္ယူေနတဲ့ပန္းေလးတို ့ေရ…
စာေပ ။ ရသ။ သုတ။ ေတြ ေလ့လာရမယ့္ခ်ိန္္like ေပးသူမ်ား အတြက္ cbမွာအခ်ိန္ ျဖဳန္းလို ့တစ္ေန ့တာ online တက္ခ်ိန္ ညီမေလးတို ့( ဘာ) ပညာေတြ တိုးပြားခဲ့လဲ?
တကယ္ေခတ္မွီျပီး ဆိုရွယ္ က်တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကမိတ္ကပ္နဲ႕မ်က္နွာေဆးျခယ္ျပီး သမီးလွလာဟင့္ ဆိုတဲ့ စကား မေမး ခဲ့ဘူး
ထက္ျမက္တဲ႕အမ်ိဳးသမီးေတြ့က online ကိုဘဝေအာင္ျမင္မႈ႕ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ဘယ္လို ေနထိုင္သင့္တယ္ဘယ္လိုတိုးတက္ေျပာင္းလဲေနတယ္ဆိုတာပဲ အဓိက ထားျပီး စာေပ။ ရသ ။ သုတ နည္းပညာ ေတြ အာရံုထားတက္ၾကတယ္
မိန္းမေကာင္း မိန္းမျမတ္ေတြ က Online ေပၚက လွတယ္ ေခ်ာတယ္ ဆိုတဲ့ တဒဂၤ သာယာမႈ႕ အတြက္အစဥ္အျမဲထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ဂုဏ္သိကၡာ ကို ခ်နင္းျပီ ေက်ာ္ျကားမႈ့ကို မမက္ေမာဘူး
မိန္းမသား သဘာဝ လွတယ္ ေခ်ာတယ္ ဆိုတဲ့စကား မိန္းမသားတိုင္း သေဘာေတြ့ေပမဲ့ အလွတရား ဆိုတာ ဘဝ တစ္ခုလိုသတ္မွတ္မထားဘူး မိန္းမသား တိုင္းရဲ႕ မရွိလည္းျဖစ္တဲ့..လိုအပ္ခ်က္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အျဖစ္ အလွခ်ယ္သလို ့ေထိုင္ၾကတယ္ မိမိ အလွကရမၼက္အေနနဲ႕အသြင္ေျပာင္း မယူဘူးပုရိသ ေတြ အတြက္ စိတ္ကူးနဲ ့တစ္ညအပန္းေျဖဖို့အတြက္ အလွျပင္တာမဟုက္ဘူး
ႏွာဘူးအႀကိဳက္ လိုက္ျပီး မိမိ ရွိတာေတြ ေဖာ္ျပရင္ေတာ့ေယာက်ၤား သဘာဝ ပါးစပ္ကေလးစိုက္ ခ်စ္ခြင့္ပန္ၿပီးရရင္အျမတ္ မရရင္ အရင္းဆိုၿပီး ရိတဲ့တဲ့ အေျပာခံအၾကည့္ခံမစစ္မွန္တဲ့ အခ်စ္ေတြနဲ႔ အေရြးခ်ယ္ခံရဖို႔ ေသခ်ာေနျပီ မို ့
ပန္းေလး တို ့ေရ …စိတ္ကူး နဲ ့မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း ခံရတဲ့ဖာဘဝ မေရာက္ ေစနဲ ့ကြယ္ဆယ္လီဆိုတာဂုဏ္ယူစရာမဟုတ္တဲ ့နာမ္စားတစ္ခုပါလို့ေျပာႀကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။
စာ​ေရးသူကို မ​ေကာင္​းျမင္​့လို႔ တဏွာ ႐ူးလိုသတ္​မွတ္​ရင္​ခ်က္​ခ်င္​ block သြားႏိုင္​ပါတယ္​
ေစတနာ ​ေမတၱာ အနစ္​နာ မ်ားစြာျဖင္​့ဤ စာအား ​ေရးသား လိုက္​သည္​
ထာ၀ရ#ကိုႀကီး “သိန္​း​ေမာင္​​ေမာင္​ ”
Online ​ပေါ်မှာ ပုံတင်​​ကောင်​း​သော အစ်​မ ညီမ​လေးများ မ​ကျော်​ပဲဖတ်​​ပေးကြပါရန်​
၏စာ​စောင်​ကို ၂၀၁၃ မှာ ​ရေးသားခဲ့တာပါ ယခု မဖတ်​ရ​သေးတဲ့ သူ​တေ​ွအတွက်​ ပြန်​တင်​​ပေးပါရ​စေ
(စာရေးသူအသုံးအနှုံး ရိုင်းကောင်း ရိုင်းနိုင်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် ပွင့်လင်းစွာပြောတတ်တဲ့အမူအကျင့်ကြောင့် စာဖတ်သူများ နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်…ဒီစာကိုဆုံးအောင်ဖတ်ကြည့်ပါ…ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာအမှန်တရားတစ်ခု သိရှိလက်ခံလိုက်ကြရမယ်ဆိုရင် ရေးရကြိုးနပ်ပါပြီ)
Facebook ပေါ်မှာ မိန်းမသားတစ်ချို့မှားယွင်းမှုတွေ နဲ့ ့သာယာနေကြတာတွေ့ရတယ်… ပုရိသ ကျားသဘာဝ ကို နားမလည်… ထင်ပေါ်မှုအတွက် မပေါ် ပေါ်အောင်ဖော်လို ့… အဝတ်ဗလာလေးတွေနဲ ့ဆယ်လီရူး ရူးနေကြပြန်တယ် ….
သမီးလှလာဟင့်… ဆိုတဲ ့နောက်မှာ သားကောင်ရှာတဲ့ ကျားတချို ့ပေးတဲ့ likeသိန်းချီရလို့တဏှာရူးတွေရဲ့ အလှဘုရင်မ အဖြစ် မော့ကြွားနေကြပြန်တယ်
ညစ်ညမ်း မှုတွေအောက်မယ် သား မယား အဖြစ်ဆဲဆိုခံနေရလည်း သူ ့မတို ့အတွက် စိတ်ထားကောင်းသူ ကြီး အဖြစ်ဖော်ပြလို့မိမိရဲ့အမှားတွေကိုပြုပြင်ဖို့မကြိုးစားဘဲ ဖော်မြဲ ထုတ်ဖော်ပြမြဲမို ့စိတ်ကူးနဲ့ မုဒိမ်းကျင့် ခံနေရှာတယ်
အကိတ် အကိတ်ဆိုတဲ့ ခေတ်စကားကြောင့်မိန်းမသားတချို onlineကို ဘဝထင် ဆယ်လီဆိုတဲ့ နာမ်စားလေးရဖို ့အပြိုင်အဆိုင် ဖော်ချွတ်လေးတွေနဲ့ပုရိသတွေအတွက် စိတ်ကူးနဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခံနေရတဲ့ ဆယ်လီရူးတွေ များလာခဲ့တယ်
မင်းသမီးတွေက ဖော်ချွတ် ဆယ်လီရူး ငပိန်းမတွေက အကုန်ဖော်ထုတ်လို ့ဖာဆန်ဆန်စရိုက်ပျက်တွေနဲ့ onlineဆိုတာ သားကောင်ရှာတဲ့ ပုရိသကျားတွေအတွက် ပိုက်ဆံပေးဖာချစရာမလို Free မုဒိမ်းကျင့်လို ့ရနေခဲ့ပြန်တယ်
သမီးလှလာဟင့် ဆိုတဲ့စကားနဲ ့ပုရိသတွေကိုချုပ်…
ရင်လေးကိုဖော် တင်လေးကော့လို ့
ဆယ့်နှစ်ကြိုးကဝေ နည်းတွေနဲ့ပြုစားအမြီးလေးနန် ့အညှီအဟောက်ကြိုက်တဲ့ တဏှာရူး ခွေးတစ်အုပ်ရဲ့ အားပေးမှုအောက်​မယ်တော်တော်ခရီးပေါက်လို့အော်…ငါ့ညီမလေးများကငွေပေးစရာမလိုတဲ့ online ဖာဆိုလားဘဲ
ငါကတော့ Facebook ဆယ်လီကွ ဆိုတဲ့ မာန် နဲ ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ့် အလှဘုရင်မ တစ်ပါး လိုထင်ပြီးLike တွေ ပေါ်မှာ ဂုဏ်ယူနေတဲ့ပန်းလေးတို ့ရေ…
စာပေ ။ ရသ။ သုတ။ တွေ လေ့လာရမယ့်ချိန််like ပေးသူများ အတွက် cbမှာအချိန် ဖြုန်းလို ့တစ်နေ ့တာ online တက်ချိန် ညီမလေးတို ့( ဘာ) ပညာတွေ တိုးပွားခဲ့လဲ?
တကယ်ခေတ်မှီပြီး ဆိုရှယ် ကျတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကမိတ်ကပ်နဲ့မျက်နှာဆေးခြယ်ပြီး သမီးလှလာဟင့် ဆိုတဲ့ စကား မမေး ခဲ့ဘူး
ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ့က online ကိုဘဝအောင်မြင်မှု့ အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘယ်လို နေထိုင်သင့်တယ်ဘယ်လိုတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာပဲ အဓိက ထားပြီး စာပေ။ ရသ ။ သုတ နည်းပညာ တွေ အာရုံထားတက်ကြတယ်
မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ်တွေ က Online ပေါ်က လှတယ် ချောတယ် ဆိုတဲ့ တဒင်္ဂ သာယာမှု့ အတွက်အစဉ်အမြဲထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကို ချနင်းပြီ ကျော်ကြားမှု့ကို မမက်မောဘူး
မိန်းမသား သဘာဝ လှတယ် ချောတယ် ဆိုတဲ့စကား မိန်းမသားတိုင်း သဘောတွေ့ပေမဲ့ အလှတရား ဆိုတာ ဘဝ တစ်ခုလိုသတ်မှတ်မထားဘူး မိန်းမသား တိုင်းရဲ့ မရှိလည်းဖြစ်တဲ့..လိုအပ်ချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အဖြစ် အလှချယ်သလို ့ထေိုင်ကြတယ် မိမိ အလှကရမ္မက်အနေနဲ့အသွင်ပြောင်း မယူဘူးပုရိသ တွေ အတွက် စိတ်ကူးနဲ ့တစ်ညအပန်းဖြေဖို့အတွက် အလှပြင်တာမဟုက်ဘူး
နှာဘူးအကြိုက် လိုက်ပြီး မိမိ ရှိတာတွေ ဖော်ပြရင်တော့ယောကျင်္ား သဘာဝ ပါးစပ်ကလေးစိုက် ချစ်ခွင့်ပန်ပြီးရရင်အမြတ် မရရင် အရင်းဆိုပြီး ရိတဲ့တဲ့ အပြောခံအကြည့်ခံမစစ်မှန်တဲ့ အချစ်တွေနဲ့ အရွေးချယ်ခံရဖို့ သေချာနေပြီ မို ့
ပန်းလေး တို ့ရေ …စိတ်ကူး နဲ ့မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း ခံရတဲ့ဖာဘဝ မရောက် စေနဲ ့ကွယ်ဆယ်လီဆိုတာဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်တဲ ့နာမ်စားတစ်ခုပါလို့ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
စာ​ရေးသူကို မ​ကောင်​းမြင်​့လို့ တဏှာ ရူးလိုသတ်​မှတ်​ရင်​ချက်​ချင်​ block သွားနိုင်​ပါတယ်​
စေတနာ ​မေတ္တာ အနစ်​နာ များစွာဖြင်​့ဤ စာအား ​ရေးသား လိုက်​သည်​
ထာဝရ#ကိုကြီး “သိန်​း​မောင်​​မောင်​ “
Previous Article သိသိသာသာ အသားအရည်ပိုကြည်လာစေမယ့် Detox Water ပြုလုပ်နည်း….
Next Article ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော် စတည်တည်းက ဆိုက်ကားနင်းတာတဲ့….